1 afọ 7 ọnwa gara aga #686 by Bobpa567
M na-agba naanị ọhụrụ Fort Wayne Int Airport installer.into a folder nke m. M mgbe nyefee mma / udidi m Addons folder. Ma na nke a ka m na-ahụ na abụọ nchekwa na-kere eke (1) fort_wayne_intl_airport_fsx na (2) fort_wayne_intl_airport_fsx_part2. Olee otú m aka na Part2 folder. Ime ha nwere na-merged dị ka ma ọ bụrụ na part2 bụ update na overwriting mbụ faịlụ.
Enyemaka ọ bụla ukwuu ekele!
1 afọ 7 ọnwa gara aga #687 by rikoooo
Gịnị mere ị ga-achọ iji wụnye mma aka? The auto-installer nwere ike ijikwa ọrụ ọ bụla dakọtara simulators.
"Fort_wayne_intl_airport_fsx" abịa na mbụ ọnọdụ na "fort_wayne_intl_airport_fsx_part2" na-abịa na abụọ ọnọdụ gị FSX mma n'ọbá akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye aka a mma ị ga-eme ka ma nchekwa si mma n'ọbá akwụkwọ.
1 afọ 7 ọnwa gara aga #689 by Bobpa567
Daalụ maka gị Ama. Ihe mere m na-ahọrọ na-eme a ntuziaka nwụnye bụ. M nwere a raara onwe ya nye SDD m Adon na Imea mma na m na-achọghị installers na-etinye mma faịlụ na SSD nwere Win 10 na ya. M ihe bụghị otu ọkachamara ma dị nnọọ na-esonụ ndụmọdụ ahụ e nyere na ndị ọzọ forums wdg
Oge ike page: 0.288 sekọnd